Ukuba awuyazi ukuba yintoni iNqaku leWordPress yaBantwana ... | Martech Zone
Lwesine, Okthobha 29, 2020 Lwesine, Okthobha 29, 2020 Douglas Karr
Uguqula imixholo yeWordPress ngokungachanekanga.
Sisebenze nabathengi abaninzi kwaye sakha amakhulu eendawo zeWordPress kule minyaka idlulileyo. Ayikuko ukuba umsebenzi wethu kukwenza iiWebhusayithi zeWordPress, kodwa siyaphela senzela abathengi abaninzi. Abathengi abaze basebenzise iisayithi zeWordPress rhoqo. Bahlala beza kuthi ukunceda ukwandisa indawo zabo zokukhangela, ezentlalontle kunye notshintsho.
Rhoqo kunoko, singena kwisiza sokwandisa iitemplate okanye ukwakha iitemplate zephepha elitsha lokufika, kwaye sifumanisa into embi. Sisoloko sifumana umxholo owenziwe kakuhle, oxhaswe kakuhle othengwe njengesiseko sesiza emva koko walungiswa kakhulu yiarhente yangaphambili yabathengi.
Ukuhlela umxholo osisiseko sisenzo esibi kwaye kufuneka uyeke. I-WordPress iphuhlisiwe Imixholo yomntwana ukwenzela ukuba ii-arhente zenze umxholo ngaphandle kokuchukumisa ikhowudi engundoqo. Ngokutsho kweWordPress:
Umxholo womntwana ngumxholo ozuza njengelifa ukusebenza kunye nesimbo somnye umxholo, obizwa ngokuba ngumxholo womzali. Imixholo yabantwana yindlela ecetyiswayo yokuguqula umxholo okhoyo.
Njengoko imixholo iba nokwenzeka ngakumbi nangakumbi, umxholo uhlala uthengiswa kwaye uhlala uhlaziywa ukhathalelo lweebugs okanye imingxunya yokhuseleko. Abanye abayili bemixholo bade baqhubeke nokongeza amanqaku kumxholo wabo ngokuhamba kwexesha okanye baxhase umxholo ngohlaziyo lwenguqulo yeWordPress. Sithenga uninzi lwemixholo yethu Umxholo webali. Uya kufumanisa ukuba imixholo ephezulu kwi-Themeforest ithengiswa amashumi amawaka amaxesha kwaye ineearhente zoyilo ezipheleleyo ziyaqhubeka nokuzixhasa.
Xa sisebenza kunye nomthengi, siye sibaphonononge imixholo ukuze babone amanqaku kunye nokusebenza kwabo. Siqinisekisa ukuba umxholo uyaphendula kwizixhobo eziphathwayo kwaye unokuguquguquka okukhulu kubeko kunye neekhowudi ezimfutshane zokwenza ulwenziwo. Senza ilayisensi kwaye sikhuphele umxholo. Uninzi lwale mixholo luza kuqala lupakishwe nge- Umxholo wezingane. Ukufaka zombini Umxholo wezingane kwaye Umxholo womzali, kwaye emva koko isebenze Umxholo wezingane ikuvumela ukuba usebenze kuMxholo woMntwana.
Ukwenza ngokwezifiso uMxholo woMntwana
Izihloko zomntwana ziqheleke kwangaphambili kunye nomxholo womzali kwaye zithiywe emva komxholo kunye noMntwana kuyo. Ukuba umxholo wam ngu IAvada, Umxholo womntwana ubizwa ngokuba ngu-Avada Child kwaye uqulethwe kwi umntwana we-avada ifolda. Ayisiyoyona ndibano ibalaseleyo yokuqamba amagama, ke siyibiza ngokutsha umxholo kwifayile yesitayile.css, sayiza igama elitsha kwifolda emva komthengi, kwaye ke ubandakanya umfanekiso-skrini wokugqibela, owenzelwe indawo. Senza ngokwezifiso iinkcukacha zeshiti ukuze umthengi abone ukuba ngubani owakhe ngexesha elizayo.
ukuba Umxholo wezingane ayifakwanga, usenokwenza enye. Umzekelo woku ngumxholo womntwana esiwenzele iarhente yethu. Sathiya umxholo DK New Media 2018 emva kwendawo yethu kunye nonyaka ophunyezwe ngayo kwaye wabeka umxholo woMntwana kwifolda nye-sibhozo. Ishidi lesitayile seCSS lahlaziywa ngolwazi lwethu:
/ * Igama lomxholo: DK New Media Inkcazo ka-2018: Umxholo womntwana we DK New Media ngokusekwe kumxholo wombhali we-Avada: DK New Media
Umbhali we-URI: https://dknewmedia.com Template: Avada Inguqulelo: 1.0.0 Umbhalo weNdawo: Avada * /
Ngaphakathi Umxholo wezingane, Uya kubona umxholo wokuxhomekeka komzali ochongwe njenge template.
Ngaphandle kolunye uhlengahlengiso lweCSS, ifayile yokuqala yeetemplate esifuna ukuyiguqula yayiyeenyawo. Ukwenza oku, sakopa ifayile ye- footer.php kumxholo womzali emva koko sayikopa kwifayile ye- nye-sibhozo ifolda. Emva koko sihlele ifayile ye-footer.php ngokwezifiso zethu kwaye indawo yathatha ezo.
Isebenza njani imixholo yomntwana
Ukuba kukho ifayile kwifayile ye- Umxholo wezingane kunye noMxholo woMzali, ifayile yoMxholo woMntwana iya kusetyenziswa. Ngaphandle kwemisebenzi.php, apho ikhowudi kwimixholo yomibini iya kusetyenziswa. Izihloko zomntwana sisisombululo esihle kwingxaki enzima kakhulu. Ukuhlelwa kweefayile zomxholo ongundoqo akukho-hayi kwaye akufuneki kwamkelwe ngabathengi.
Ukuba ujonga iarhente yokwakhela indawo yeWordPress, funa ukuba baphumeze uMxholo woMntwana. Ukuba abayazi into oyithethayo, fumana iarhente entsha.
Izihloko zaBantwana ziBalulekileyo
Uqeshe iarhente ukuba ikwakhele indawo, kwaye baphumeze Umxholo woMzali oxhaswe kakuhle kunye noMxholo woMntwana oqheleke kakhulu. Emva kokuba indawo ikhutshiwe kwaye uyigqibile ikhontrakthi, i-WordPress ikhupha uhlaziyo olungxamisekileyo olulungisa umngxunya wokhuseleko. Uhlaziya iWindowsPress kwaye indawo yakho ngoku yaphukile okanye ayinanto.
Ukuba iarhente yakho ibiyihlelile Umxholo womzali, uya kulahleka. Nokuba ufumene umxholo woMzali ohlaziyiweyo, kuya kufuneka uyikhuphele kwaye usombulule naluphi na utshintsho lwekhowudi ukuzama ukubona ukuba loluphi ulungiso olulungisa umba. Kodwa kuba iarhente yakho yenze umsebenzi omkhulu kwaye yaphuhlisa Umxholo wezingane, ukhuphele uhlaziyo oluhlaziyiweyo Umxholo womzali kwaye uyifake kwiakhawunti yakho yokubamba. Hlaziya iphepha nayo yonke into iyasebenza.
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa eyam Umxholo webali ikhonkco lokudibana kweli nqaku.
tags: i-avadaumxholo womntwanaumxholo wabazalisihlokoUmxholo womxholo wegama lomntwanaUmxholo womxholo wegama lomzaliimixholo yamagama
Ukuqala kukaToluna: Ubukrelekrele boThengi boBasebenzisi beXesha loBuntu noLuntu lweHlabathi